नियमित समयमै खानपिन नहुदा ग्याष्ट्रिकबाट पिडित | MY OPINION:: MY PRIDE :: Rajendra Bishwakarma
मेरो विचार-मेरो स्वतन्त्रता !!!	नियमित समयमै खानपिन नहुदा ग्याष्ट्रिकबाट पिडित	नोभेम्बर 12, 2011 by RAJENDRA BISHWAKARMA एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि म काठमाडौं प्रवेश गरे । प्रवेश लगतै म कलेज जीवनसँगै जागिरे पनि भए । त्यसकारण मैले नियमिति समयमै खाना खान सक्ने अवस्था रहेन । विहानको कलेज र बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय व्यवस्ताले मैले समयमा खानाखान पाउने अवस्था रहेन । त्यसपछि मैले होटेलमा खानाखान शुरु गरे । होटेलको खाना त्यस्तै हो अनि मैले होटेलमा पनि खान छोडे र आफूले नै पकाएर खाने निधो गरे ।
मैले आफैले पकाएर त झन समयमै नियमित रुपमा खानाखान पाउने अवस्था नै थिएन । तर पनि मैले आफूलाई त्यसैअनुसार परिवर्तन गर्छु भनेर कोशिस गरिरहे गरिरहे तर त्यो पूर्णरुपमा सफल हुन सकिन । त्यसैको फल स्वरुप म ग्याष्ट्रिकको पीडित भए । यो समस्या निरन्तर करिब ३ वर्ष जति रहयो । त्यसपछि भाई एसएलसी पास गरि उच्चशिक्षाका लागि काठमाडौं प्रवेश गरेपछि यो समस्या अलिअलि गर्दै समाधान हुनपुग्यो । नियमित समयमै भएको खानपिनले गर्दा विगत ५ वर्षदेखि ग्याष्ट्रिकको समस्याबाट मुक्त भएको थिए ।
अहिले म करिब एक महिना भो काठमाडौंमा एक्लैबसिरहेको छु । त्यसैले मेरो ग्याष्ट्रिकको समस्या फेरि उकल्जियो र म अलिअलि पीडित हुन थालेको छु । म कोठामा एक्लै भएकोले नियमित समयमै खानाखान सकिरहेको छैन । त्यसैले यो समस्या उकल्जिउको हो । मलाई राम्ररी थाहा छ । ग्याष्ट्रिकको राम्रो उपचार भनेको नियमित समयमै खानपिन नास्ता धेरैभन्दा धेरै पानीको प्रयोग चिल्लो-पिरो कम खाने । तर मलाई यति थाहा हुदाँहुदै पनि म यी कुरालाई नियमित गर्न सकिरहेको छैन तर पनि म कोशिस गरिरहेको छु ।
Category : स्वास्थ्यका कुरा	लेखको सफर गर्नुहोस्
← I love you CHHORI ! I love you	@Godabari-23 Dec 2011 →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...